आखिर विहेपछि किन मोटाउँछन् महिला ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण – Khabar Aajako
आखिर विहेपछि किन मोटाउँछन् महिला ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण
आजको खबर | प्रकाशित : २०७५ मंसिर २१ गते १०:५९
पुरुष मित्रहरु कुनै स्लिम स्त्रीलाई मन परेर विहे गर्ने फैसला गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरामा सम्झौता गर्नैपर्छ । त्यो के हो भने तपाइँले मन पारेकी स्लिम केटीको सरिर विहेपछि पनि उस्तै स्लिम रहन्छ भन्ने पक्का हुँदैन । अर्थात् विहेपछि कुनैपनि महिलाको सरिर भद्धा हुँदैजान्छ त्यसैले अहिले भोलि भद्धा बनेको खण्डमा पनि उस्तै माया गर्ने बाचा गरेर लगनगाँठो कस्ने सुर कस्दा राम्रो होला ।
मेरिकामा गरिएको पछिल्लो अनुसन्धानले विहेपछि महिलाहरु मोटाउने र सम्बन्ध विच्छेदप्रति पुरुषहरु मोटाउने तथ्य पत्ता लगाएको छ । ओहायो विश्वविद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानले यस्तो देखाएको हो । महिलाहरुले विहेपछि आफ्ना पतिको वा कर्मघरका मान्छेहरुको बढि सेवा सुश्रुषा गर्नुपर्ने हुन्छ , जसका कारण उनीहरुले आफ्नो सरीरको तन्दुरुस्तीको लागि समय दिन पाउँदैनन् । बिहेपछि महिलाहरु बढि आत्मविश्वासी बन्ने र आफ्नो जिउडाल र सुन्दरताको मामिलालाई कम मात्र महत्व दिने गरेकाले पनि सरिर मोटाउँदै जाने अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् ।
अध्ययनकर्ताहरुले पुरुषहरु भने विहेपछि दुब्लाउने र डिभोर्सपछि मोटाउने गरेको बताउँछन् । विहेपछि पुरुषहरुले मानसिक मात्र होइन शारीरिक रुपमै बढि उर्जा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा बिहेपछि पुरुषहरु आफ्नो तन्दुरुस्तीको मामिलामा समेत महिलाको भर पर्छन् त्यसैले जब डिभोर्स पछि उनीहरु एक्ला हुन्छन् उनीहरुलाई व्यायामको होस हुँदैन र मोटाउँछन् ।
२०७५ मंसिर २१ गते १०:५९ मा प्रकाशित
पेचिलो बन्दै दुई नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानीको मुद्दा
हावाहुरीले बर्दियामा तीन घाइते र झण्डै चार दर्जन घरमा क्षति
शव जलाउने विषयले रौतहट तनावग्रस्त : प्रहरीद्धारा २० राउण्ड हवाई फायर
‘देश समृद्धका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ’ : मुख्यमन्त्री राउत
ओली र प्रचण्डबीच ‘जनताको जनवाद’ मा यसरी भयो सहमति